Saraakiil caddaan ah oo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Saraakiil caddaan ah oo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in halkaasi ay gaareen saraakiil ciidan oo ka kala socda dowladaha Talyaaniga, Ingiriiska iyo Mareykanka.
Saraakiishaan ayaa markii ay gaareen magaalada Baydhabo, waxay halkaasi kula kulmeen mas’uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyagoona u ballan qaaday in deegaanada maamulkaasi ay ka hirgelin doonaan xarumo ciidan, si ay qeyb uga noqoto xoojinta iyo tayeynta ciidamada xooga Dalka Soomaaliyeed.
Abaanduulaha taliska qeybta 60aad ee ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Sare Ismaaciil Khaliif Shire oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saraakiishaasi caddaanka ah ee ka socotay dalalka Talyaaniga, Ingiriiska iyo Mareykanka ay kala hadleen inay ka taageeraan dhinacyada tababarada iyo taakulaynta ciidamada xooga dalka, gaarahaan kuwa ka howlgala gobolada Bay iyo Bakool.
Sida ay sheegtay UNSOM waxaa saraakiishaasi hoggaaminayay Brig. Simon West OBE, oo ah la-taliyaha sare ee ciidamada UN-ka Soomaaliya, waxaana uu booqday saraakiil UK ka socda oo tababar siiya ciidamada Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.